SomaliaReport: Kenya-Soomaliya Qabsaday Tuulo Istaraatiiji Ah
By MOHAMED BEERDHIGE 10/28/2011
Ciidamada dawladda Soomaaliyeed oo ay taakulaynayaan ciidamda militariga Keenya ayaa gancanta ku dhigay Buur-Gaab, oo hoos timaada maamulka degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose, una jirta 140km koonfurta Kismaayo, kadib markii uu dagaal kulil ku qaadeen fallaagada al-Shabaab.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada al-Shabaab iyo askarta dowladdu wuxuu ka qarxay gudaha tuullada Buur-Gaab subaxnimadii Jimcaha, taasoo ku khasabtay inay xagjirayaashu cararaan, sarkaal DKMG ayaa u xaqiijiyey Somalia Report. Labada dhinacba waxay isticmaaleen hub culus iska horimaadkooda.
"Haa, waan qabsanay markii aan cayrinay kooxda argagaxisada al-Shabaab. Aagu hadda waa daganyahay. Waan ognahay meeshani waa halkii dagaalyahana ajnabiga Islaamiyuunta ahi ka si sharcidaro ah uga soo galeen dalkeena," waxaa yiri Axmed Deeq, sarkaal DKMG oo ku sugan gobolka Jubbada Joose.
Dadka degaanka degan ayaa xaqiijiyey in ciidamada dowladdu ay xukumaan magaalada.
"Haa, saaka waxaa na cajabiyey inaan aragno askar keenyati iyo Soomaaali ah oo guryaha baaraya. Saraakiisha Soomaalida ayaa inoo sheegay inaan ka baqin, laakiinse aan taagerno and aana difaacno iyaga," Cali Ciise, oo degan tuulada Buur-Gaab, ayaa us heegay Somalia Report.
Buur-Gaab waxay ahayd meel dakhli kasoo galo fallaagada oo waxay si sharci daro ah ugadi jireen dhuxusha.
Illaa waqtigaa helikobtaro ayaa lagu arkayey oogada magaalooyinka ay falaagudu xukunto sida Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo caasimada Muqdisho.